जलविद्युत आयोजना समयमा पूरा नगर्ने प्राधिकरण कर्मचारीलाई अब भाटे कारबाही - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ३०, २०७५ 8591 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना समयमा पूरा गर्न चासो नदिने प्रमुख वा उच्च अधिकारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने भएको छ ।
सरकारी आयोजना वर्षौंसम्म पूरा नहुँदा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्रभावित हुनुका साथै आमनागरिकमा अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्री पुन र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माणमा केन्द्रित हुन प्राधिकरण तथा सरोकारवाला आयोजनालाई निर्देशन दिए । मन्त्री द्वयले संयुक्तरूपमा ५ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेका छन् ।
निर्देशनको ५औं बुँदामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माणमा लापरबाही भई समयमै गुणस्तरीय काम हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएमा गृह मन्त्रालयले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण, आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या, उपत्यकाको सडक विस्तारमा विद्युतीय पोल सार्नेलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सहयोग चाहिए मन्त्रालयसँग सम्पर्क राख्न मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
विद्युत चोरीलाई परिणाममुखी बनाउन प्राधिकरण क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयले प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा पुनले जोड दिए । विद्युत चोरी गरेको पाइए दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
यसैगरी, जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण समस्या दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गर्ने सहमति भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारक्रममा विद्युतीय पोल नसारेको भन्ने गुनासो बढेपछि यसको समाधान गर्न पनि दुवै मन्त्रीले अग्रसरता देखाएका छन् ।